Ọzara nke United States | Akụkọ njem
N'ọtụtụ ihe nkiri na United States, anyị na-ahụ ọzara nwere ndị na-egbu egbu, ndị na-agba ehi, ndị na-ere ọgwụ ọjọọ ma ọ bụ ndị na-eme njem. Nke Ọzara United States Ha bụ otu n'ime ebe kacha ewu ewu maka ịse ihe nkiri.
Ma gịnị bụ ha? Ọzara ole dị? Kedu àgwà ha nwere? Ihe niile na ihe ndị ọzọ na akụkọ anyị taa: ọzara America.
1 Ọzara United States
3 Ọzara Chihuahuan
4 Ọzara Sonoran
5 Ọzara Mojave
N'ozuzu ahịrị na n'okpuru ọgbara ọhụrụ iko, ọzara nke United States na n'ebe ugwu Mexico a na-ekewa n'ime ụzọ anọ nke dabere na nhazi nke osisi na nkesa ya, akụkọ ihe mere eme nke geological nke mpaghara ahụ, ala na ọnọdụ ịnweta ya, elu na usoro mmiri ozuzo.
E nwere nnukwu ọzara anọ na atọ n'ime ha na-atụle "Ọzara na-ekpo ọkụ"Ọ bụghị naanị n'ihi na ha na-enwe oke okpomọkụ n'oge okpomọkụ mana n'ihi na osisi ha yiri nke ọma. A na-ewere ọzara nke anọ dịka "Ọzara oyi" n'ihi na ọ na-ajụ oyi ma osisi anaghịzi enwe ebe okpomọkụ dị ka nke atọ ndị ọzọ.
Nke a ọzara ogide ebe 492.098 square kilomita ya mere ọ bụ nke kasị ukwuu na mba ahụ. Ọ bụ ọzara oyi na okpomọkụ, ọkọchị ọkọchị na oyi oyi ebe mgbe ụfọdụ ọ pụrụ ọbụna snow. Nke a bụ n'ihi na ọ nọ n'elu elu ebe ọ na-agafe mpaghara dị iche iche nke obodo dịka California, Utah, Oregon, Idaho na Arizona. Kpọmkwem, ugwu atọ ụzọ anọ nke Nevada, ọdịda anyanwụ na ndịda Utah, ndịda nke atọ nke Idaho, na ndịda ọwụwa anyanwụ akuku nke Oregon.
Ndị ọzọ na-ewerekwa ya na ọ gụnyere obere akụkụ nke ọdịda anyanwụ Colorado na ndịda ọdịda anyanwụ Wyoming. Ma ee, na ndịda Ọ gbara ọzara Mojave na Sonora. N'ime ọtụtụ afọ, ọzara ọ kpọrọ nkụ nke ukwuu n'ihi na ugwu Sierra Nevada na-egbochi iru mmiri na-abịa site na Oke Osimiri Pasifik. Ọchịchọ ịmata ihe? Ọ nwere ihe dị ndụ kacha ochie nke mmadụ mara, Britkecone pine. A na-eme atụmatụ na ụfọdụ ụdịdị dị ihe dị ka afọ 5.
N'ikwu okwu banyere ahịhịa n'ozuzu, osisi nke ọzara a bụ otu, nke nwere ụdị osisi shrub kachasị dị kilomita na kilomita. Cactus? Obere ole na ole. Ọzara a nwekwara ngalaba dị iche iche. Osimiri bụ otu, nke nwere ọrụ ala, Ala Colorado nwere ọmarịcha ọdịdị ala ya na ugwu dị elu, bụ ihe ọzọ.
Ọzara a na-agba ọsọ n'etiti United States na Mexico ma nọrọ ebe 362.000 square kilomita. Ọtụtụ n'ime ya dị na Mexico na n'akụkụ US ọ nwere akụkụ Texas, Arizona na New Mexico.
Nke bụ eziokwu bụ na ọzara a nwere ala pụrụ iche na-agbanwe agbanwe mgbe niile. Ọ bụ ọzara na-adịghị aga, mana ka dị o nwere ọtụtụ ụdị osisi na anụmanụ. Enwere yuccas, enwere cacti, enwere ohia. N'ime kwa Big Bend National Park na-arụ ọrụ na Rio Grande na-agafe ya na-enye mmiri zuru ezu tupu ọ banye n'Ọwara Oké Osimiri Mexico.
Ọ bụ ọzara buru ibu. N'oge oyi, okpomọkụ dị jụụ na n'oge okpomọkụ dị oke ọkụ. Ọtụtụ n'ime ya na-enweta ntakịrị mmiri ozuzo n'afọ niile n'agbanyeghị na ọ nwere ike izo n'oge oyi, oge mmiri ozuzo bụ okpomọkụ.
N'elu ya siri ike ịkọwapụta n'asụsụ geologically, mana n'ozuzu enwere ọtụtụ nkume limestone na ala calcareous. Enwere ọtụtụ bushes, ọ bụ ya ahụkarị ohia ọzara na anyị na-ahụ na sinima, ma perennial ụdị dị ole na ole. Ụmụ anụmanụ? Enwere ike inwe anụ ọhịa wolf isi awọ Mexico.
Ọzara a Ọ na-esi na Mexico gaa Arizona gaa n'ebe ndịda California. Ọ na-ekpuchi ebe dị ihe dị ka puku square kilomita 259 yana ókèala Mojave Desert, Colorado Plain na Peninsular Ranges. Nkewa mpaghara gụnyere ọzara nke Colorado na Yuma.
Ebe kacha ala n'elu oke osimiri bụ Oké osimiri Salton, nwere ogo salinity dị elu karịa oke osimiri Pasifik n'onwe ya. Na mgbakwunye na oke osimiri a, Osimiri Colorado na Osimiri Gilas na-agafe ebe a dị ka isi iyi mmiri. Iri mmiri ewepụtala ala na-eme nri maka ọrụ ugbo n'ọtụtụ mpaghara, dịka ọmụmaatụ Imperial Valleys ma ọ bụ Coachella na California. Enwere ọbụna ụfọdụ ebe ntụrụndụ iji nọrọ n'oge oyi na-ekpo ọkụ Palm Springs, Tucson, Phoenix.
Otu n'ime ihe ọkụkụ a na-ahụkarị bụ saguaro cactus, ezigbo ewu ewu n'ihi na ọ na-etolite naanị ebe a. Ọ nwere ike ịdị ogologo nke ukwuu ma ọtụtụ alaka na-esi na ogwe ya na-eto nke mere na ọ dị ka mmadụ. A na-emetọ ifuru ya site na ụsụ, aṅụ na ọbụna kpalakwukwu.
Okwesiri iburu n’obi na ọ bụ ọzara kacha ekpo ọkụ n'ime ọzara niile na North America, ma mmiri ozuzo ya na-emepụta a nnukwu ụdị ndu dị iche iche. Mmiri ozuzo okpomọkụ na-ekwe ka uto nke ụfọdụ osisi, nke oyi, ndị ọzọ. E nwere ọbụna osisi mmiri na okooko osisi.
N'ime bụ ihe ncheta obodo Sonora Desert nke malitere site na 2001, na-echebe akụkụ ya ma gosipụta ịdị ebube nke ọdịdị ala a.
Ọ na-agafe Nevada, Arizona na California wee na-enweta sentimita abụọ nke mmiri ozuzo kwa afọ nke ahụ bụ ihe ekwuru Ọzara kpọrọ nkụ nke ukwuu. Na oke ọkụ. Ọ bụkwa ọzara buru ibu ma si otú a nwee elu dị iche iche nke ala ahụ. Ebe kachasị elu bụ Telescope Peak na nke kasị ala na Ndagwurugwu Ọnwụ. Na-ekwu okwu mgbe niile banyere elu.
Otu n'ime ihe kacha pụta ìhè nke ọzara a bụ Osisi Joshua, osisi a na-ahụkarị ọ bu kwa n'ókè-ala-ya ka achọtara ya. A na-ewere ya dị ka ihe ngosi nke ụdị na nke na-enye ndụ ihe dị ka puku abụọ ụdị osisi. Ngosipụta ụdịdị? Ọ na-ezo aka na ihe dị ndụ nke nwere ike iji tụọ ụfọdụ ọnọdụ gburugburu ebe obibi. Ọzọkwa, e nwere gburugburu 200 endemic osisi ụdị na ọ bụrụ na anyị na-ekwu maka anụmanụ e nwere coyotes, nkịta ọhịa, agwọ, oke bekee ...
Ọzara a nwere ájá, ahịhịa na-adịghị ahụkebe, ebe nnu nwere borax, potassium na nnu (nke a na-egwupụta), ọlaọcha, tungsten, ọla edo na ígwè. Ọzọkwa n'ime ya elu enwere ogige ntụrụndụ mba abụọ, Ọnwụ Ndagwurugwu National Park na Joshue Tree National Park, ebe nchekwa, Mojave National, na ebe ntụrụndụ na Lake Mead.
Ọ bụrụ na-amasị gị okporo ụzọ ebe a bụ Mojave okporo ụzọ, otu n’ime ụzọ kacha ochie nke butere ndị ọsụ ụzọ na California. Ọ bụ ụzọ pụrụ iche nke echekwara ka ndị nwere obi ike gafere ya, na-agafe na mbara ala ndị na-agbanwebeghị ihe ọ bụla kemgbe oge ochie. Ha ga-adị ntakịrị karịa 220 kilomita ma eme ya na gwongworo 4 × 4.
Ọ bụ okporo ụzọ na-adịghị ahụkebe, nke nwere ụfọdụ isi iyi mmiri dị ọhụrụ nke, tupu ndị ọcha ejiri ya mee ihe, ndị India amaralarị ya. Ịga n'ihu na imecha okporo ụzọ Mojave abụghị obere ihe n'ihi na ọ bụ a njem nlegharị anya n'etiti ụbọchị abụọ na atọ, nke a na-eme na convoy nwere ọtụtụ ụgbọ ala. Ọ na-amalite na Osimiri Colorado na mgbe e mesịrị, njem anụ ọhịa na-enweghị ịntanetị, na-enweghị ọrụ, na-enweghị ụlọ oriri na ọṅụṅụ ...
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » America » United States » Ọzara United States